Melohin’ny mpiaro ny tontolo iainana ny fanapahan-kevitry ny Sri Lankey hamatsiana fitaovam-piadiana ireo vondrona ao an-toerana hiadiana amin’ny elefanta · Global Voices teny Malagasy
Vahaolana ve ny basy eny am-pelatanan'ny sivily?
Voadika ny 05 Febroary 2020 4:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Français, русский, Español, 日本語, English
Miahiahy ny mpikatroka ao Sri Lanka taorian'ny nanambaran'ny governemanta ny drafitra hamoahana basy ho an'ny zandary vaovao (hery nomem-piadiana) nofanina hiaro ireo tantsaha amin'ny elefanta.
Tombanana ho 7.500 eo ho eo ny isan'ireo elefanta mpirenireny any Sri Lanka ary olana lehibe ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona ho an'ny tantsaha ao an-toerana. Mihena ny fonenan'ny elefanta rehefa nisalovana tsikelikely ny toerana fivezivezen'izy ireo ny olombelona. Rehefa tsy manana toerana handehanana intsony ireo biby ireo dia lasa nanapotika ny voly teny an-tanimboly amin'ny fitadiavana sakafo. Nahita azy ireo ho biby mpanimba voly atahorana ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra sasany ary maro ny olona namoy ny ainy tamin'ny fifanandrinana tamin'ny elefanta. Tamin'ny taona 2019 fotsiny no manodidina ny 100 teo ireo olona matin'ny elefanta.
Nandritra ny taona 2019, elefanta miisa 361, izay betsaka indrindra hatramin'izay, no maty tany Sri Lanka ary 85% no novonoin'ny olona ho valifaty tamin'ny ‘fanimbana masomboly’. Isan-taona, mahafaty olona am-polony ny elefanta ary manimba ny fambolena sy ny fiveloman'ny olona ary novonoin'ny olona tamin'ny fefy misy herinaratra, poizina ary baomba miafina any anaty sakafo izy ireo.
Nandritra ny taona maro izay, nandray fepetra maromaro hampihenana ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona ny governemanta Sri Lankey , ​​ao anatin'izany ny famindrana toerana ireo tantsaha mipetraka eny amoron'ny ala sy ny fanomezana fefy misy herinaratra .
Tamin'ny 13 Janoary 2020, nanambara ny Minisiteran'ny Fiarovana ny Valan-javaboary any Sri Lanka fa naka zandary (hery nomem-piadiana no lazaina ho zandary eto) matanjaka miisa 2.500 ny governemanta izay ahitana mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana amin'ireo faritra tena voakasiky ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona. Efa natomboka ny dingana voalohany tamin'ny fandaharan'asa. Mahazo basy dimy isaky ny olona valo hampandosirana ireo elefanta ny zandary. Novolavolaina ihany koa ny fananganana fefy matanjaka fanampiana avy amin'ny governemanta Shinoa hiarovana amin'ny elefanta.
Nanoratra tao amin'ny Groundviews i Sunela Jayawardane:
Nasongadin'i Jayawardane ny tatitra iray tao amin'ny YouTube avy amin'ny gazetiboky Sri Lankey iray Pulse.lk izay nilaza fa nomena basy miisa 2.000 ireo tantsaha sy ny mponina mba hiarovany tenany amin'ny elefanta ary mbola misy maro hafa no havoaka.
Vao haingana no nekena ho firenena tsara indrindra ao Azia ho an'ny fizahan-tany ijerena biby i Sri Lanka. Elefanta an-jatony isan-taona no miandrona eo amoron-drano tranainy ao amin'ny Valan-javaboarim-pirenena Minneriya any avaratra afovoan'i Sri Lanka – izay fantatr'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe ‘The Gathering‘ (Fiandronana). Manontany i Jayawardane :